भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख , चक्र हुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ,त्यसको फल – Sanchar Patrika
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख , चक्र हुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ,त्यसको फल
July 26, 2020 535
काठमाडौं साउन ११ । हरेक मानिसकोे जन्मजात नै शंक र चक्र हात खुट्टामा हुने गर्दछ । हिन्दु धर्म अनुसार यसलाई भाग्य पनि भन्ने गरिन्छ । कतिले विश्वास गर्छन् त कतिले गदैंनन् । हातमा चक्र भएर मात्र हुदैंन शास्त्रअनुसार मिलेको पनि हुनुपर्दछ ।
Prevआफूसँग विहे गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रेमीको घर अगाडि धर्ना बसिन युवती
Nextलुडो खेल्नेहरु सावधान, काठमाडौंमा ७ जना पक्राउ कारण थाहा पाउदा सबै चकित
स्त्रीको खुट्टाका ९ संकेतः जसले बताउँछ पतिको भविष्यको रहस्य !
कुन कुन रोगका बिरामीले काउली खानु हुँदैन
कोरोना भाइरसबाट किन हुन्छ अचानक मृ’त्यु ? यस्तो छ रहस्य !
घरबाहिर निस्कनु भन्दा अघि यो समाचार पढ्नुहोस नत्र दु:ख पाउनुहोला